6 Siyaabood Oo Lagu Xoojiyo Xiirka Kaala Dhexeeya Lamaankaaga/Lamaantaada | Aayaha
Home»Editor's Picks»6 Siyaabood Oo Lagu Xoojiyo Xiirka Kaala Dhexeeya Lamaankaaga/Lamaantaada
Xiriirkaaga fursad wanaagsan ayuu heystaa haddii aad xoojiso xiriirk idiin dhexeeya adiga iyo lamaankaaga/lamaantaada.
Inaad dhageysatid waxa ay lamaantaada leedahay waxay xoojin doontaa xiriirka idinka dhexeeya labadiina. Markaad si taxadar leh u dhageysatid lamaantaada waxaad tustay inaad daneyneysid isla markaana qiimo uu ku fadhiyo xiriirkiina.
Dabeecad ahaan waxaan jecelnahay inaan isdifaacno marka uu qof ku faraxsaneyn waxan dhahno ama aan sameyno balse dhaqankaas kaama caawinayo xoojinta xiriirkaaga. Marka ay lamaantaada/lamaankaaga uusan qanacsaneyn dhageyso waxay leedahay/uu leeyahay adigoo aanan isdifaacin.
Xiriir joogta ah
Xiriika joogtada ah wuxuu xoojiyaa xiriirka u dhexeeya lamaanaha. Haka mashquulin inaad telka ka qabato ama aad wacdo lamaankaaga/lamaantaada.
Markaad qadariso lamaankaaga/lamaantaada, waxaad xoojisay xiriirka idinka dhexeeya. Markaad ogtahay dadaalka lamaankaaga/lamaantaada oo ay ku dooneyso in xiriirka uu shaqeeyo, lamaankaga/lamaantaada waxaad siisay dhiiri gelin ah in intaas kabadan ay sii sameyso. Qiimeey ficilkeeda.
Dhiiri geli oo u Samir lamaankaaga. Usamir marka ay lamaantaada sameyso qaladaad. Markaad usamirto lamaantaada waxaad xoojisay xiriirka kaala dhexeeyo lamaantaada.
Ma xoojin kartid xiriirka kaala dhexeeyo lamaankaaga/lamaantaada haddii lamaankaaga uusan kugu kalsooneyn, wadada kaliya ee aad kalsooni uga keensa karto ayaa ah inaad noqoto qof daacad ah oo uu ku kalsoonyahay.